Johnson Motorcycle Wave 125
670000 ~ 690000 Kyats
Wave - 125 ဆိုရင်တော့ အားလုံးအကြိုက်ပေါ့။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနာမည်ကြီးခဲ့ပြီး ယခုတိုင်လူကြိုက်များနေတဲ့ အမျိုးအစားလေးပါ။ တောရော မြို့ပါမကျန် အကုန်ကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ အကြမ်းခံတယ်လို့ ပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ 125 စီစီ အင်ဂျင်နဲ့ ဒီဇိုင်းအလန်းလေးကိုတွဲဖက်ထုတ်လုပ်ထားလို့ ရုံးသွား၊ ကျောင်းသွားမျက်နှာပန်းလှပြီး လမ်းကြမ်းမှာလည်း ကုန်အပြည့်နဲ့ အစီးခံတဲ့အမျိုးအစားဆိုတာ လူတိုင်းအသိပါပဲ။ ပိုမိုခိုင်ခံအောင် နောက်ရှော့ဘားကို လေဘူးတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ဘရိတ်ရူးအကြီးတပ်ဆင်ထားတာမို့ ဘရိတ်စနစ်ကလည်း စိတ်ချရပါတယ်။ အရောင် (၃) မျိုးလာပါတယ်။ အနက်၊ အပြာနဲ့ အနီတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနတွေမှာ စနစ်တကျနဲ့ စမတ်ကျစေဖို့အတွက်တော့ Hyundai Forklift 20 DF7 ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှာပါ။ကုန်ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုး ကိုသယ်ယူရာတွင်လွယ်ကူစေပြီး အချိန်ကုန်သက်သာစေမှာပါ။ HMC D 4BB2Ton Engine အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Pneu တာယာအမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အမြင့် 3300 mm ရှိပြီး ခရင်းခွ 1050 mm ရှိပါတယ်။
Hyundai Forklift 25 DF7
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနတွေမှာ စနစ်တကျနဲ့ စမတ်ကျစေဖို့အတွက်တော့ Hyundai Forklift 25 DF7 ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှာပါ။ကုန်ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုး ကိုသယ်ယူရာတွင်လွယ်ကူစေပြီး အချိန်ကုန်သက်သာစေမှာပါ။ HMC D 4BB2Ton Engine အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Pneu တာယာအမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အမြင့် 3,300 mm ရှိပြီး ခရင်းခွ 1050 mm ရှိပါတယ်။
Transmission Jack 1.5 Ton - ဂီယာဘောက်ချဂျိုက်
Use occasions： 1.After the vehicle is lifted by the lifter,in order not to cause damage to the removed gearbox,exhaust pipe,oil pan,etc.due to falling and pose threat to maintenance personnel when they are removed,the transmission jack shall be used to support and convey them to the repair location for repair. 2.During equipment repair in factories,it can replace manual supporting and other dangerous operations.
Hyundai Forklift 110 D7E
Hyundai Forklift ကုန်ပစ္စည်းကိရိယာများ ကိုသယ်ယူရာတွင်လွယ်ကိုစေရန်နှင့်အချိန် ကုန်သက်သာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြေကြီးတူးစက် ကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ကြီးမားသော အင်ဂျင်ပါဝါအင်အားနှင့်တူးဖော်ခြင်း၊ဟိုက်ဒြော်လစ်စက်စီးဆင်းမူကြောင့်မြေကြီးတူးဖော်ရာတွင်အလွယ်တကူတူးဖော်နိုင်ခြင်း၊ကန်တူးဖော်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများအသစ်တူးခြင်း၊ သောင်တင်သောနေရာများတွင် မြစ်ကြောင်းများပေါအောင်တူးဖော်ပေးခြင်း၊စက်၏ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ပါဝင်မူကြောင့် ဆည်မြောင်းတူးဖော်ရာတွင် နည်းစနစ်ကျခြင်း သောက်ရေကန်တူးခြင်း၊ ရွာလမ်းများဖို့ပေးနိုင်ခြင်းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေနိုင်ပြီး ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကားဘီးကို လေထိုးဖို. ဖြစ်စေ၊ ဆိုင်ကယ်ကို လေထိုးဖို. ဖြစ်စေ လေထိုးထိုင်ခုံ၊ လေထိုး စရာ အားလုံးကို လွယ်ကူစွာ ထိုးနိုင်ဖို. လေထိုးစက် အသေးလေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ Cigarette Lighter လေးနဲ. အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ချင်ပါက ဖုန်းလေး ဆက်ပေးပါနော်။ ဈေးနှုန်း - 15000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Pneumatic Oil Extractors 90L- လေသုံး ဆီစုပ်ထုတ်စက်
* Equiped withatool plate
600000 ~ 1200000 Kyats
Air Receiver The air receiver playsavery important role in compressed air system with multi-purposes by value of its design and the right air receive can also enhance the service life of compressor. Purpose 1.	The air receive stores the pressurized compressed air. 2.	It helps to maintain constant pressure at downstream 3.	It cools the compressed air 4.	The air receiver helps to separate oil and moisture from the compressed air. 5.	It allows the air compressor to have an optimum level of rest.
Concrete Mixer ဘိလပ်မြေဖျော်စက်
ဆောက်လုပ်ရေးတွင်အသုံးအများဆုံးပစ္စည်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦးနှင့်အရှည်ဆုံးတံတားအချို့တို့ရဲ့အဓိကပစ္စည်းအဖြစ်ကွန်ကရစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ကွန်ကရစ်ဟာအလွန်ရှေးကျသောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းဖြစ်ပီးအစောပိုင်းအီဂျစ်မှတ်တမ်းတွေထဲတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပြီးရောမကစတင်ပြီးအများဆုံးအသုံး ပြုခဲ့သည်။ရောမအင်ပါယာမှအဆောက်အဦးအများစုနှင့်လမ်းတွေမှာလည်းconcreteကိုအများဆုံးအသုံးပြုအားဖြည့်ခဲ့သည်။ခေတ်သစ်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာမှconcrete mixer designကိုခွင့်ပြုပြီးfixedစက်ရုံစနစ်များတွင်featuresခရီးဆောင်concretemixerရှိပါတယ်အလွန်ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်များအတွက်လည်းအလွန်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူကောင်းမွန်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးတွင်အသုံးအများဆုံးပစ္စည်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦးနှင့်အရှည်ဆုံးတံတားအချို့တို့ရဲ့အဓိကပစ္စည်းအဖြစ်ကွန်ကရစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ကွန်ကရစ်ဟာအလွန်ရှေးကျသောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းအီဂျစ်မှတ်တမ်းတွေထဲတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပြီးရောမကစတင်ပြီးအများဆုံးအသုံး ပြုခဲ့သည်။ရောမအင်ပါယာမှအဆောက်အဦးအများစုနှင့်လမ်းတွေမှာလည်းconcreteကိုအများဆုံးအသုံးပြုအားဖြည့်ခဲ့သည်။ခေတ်သစ်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာမှconcretemixerdesignကိုခွင့်ပြုပြီးfixedစက်ရုံစနစ်များတွင်featuresခရီးဆောင်concretemixerရှိပါတယ်အလွန်ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်များအတွက်လည်းအလွန်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူကောင်းမွန်ပါတယ်site၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်စွမ်းရည်အရွယ်အစားကွဲပြားခြားနားမှုရရှိနိုင်ပြီးအရွယ်အစားစံအဖြစ်အားလုံးတူညီတဲ့အားသာချက်များမျှဝေထားသည်။အားသာချက်များအနေနှင့်ကတော့အားဖြည့်အနားကွပ်နှင့်အတူတင်းကျပ်ရောစပ်စည်ပါဝင်ပြီးပြိုင်ဘက်ကင်းpaddledesignတစ်မူထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရောစပ်enhancedဒီဇိုင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံထိန်းချုပ်ပေးသောfootအော်ပရေတာtipoperatedနှင့်သန်မာခြင်း၊ကိုယ်ထည်သန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူခြင်း၊အဆိုးဆုံးဆိုက်အခြေအနေများကိုဆက်လက်တည်ရှိကျန်နေရန်အမြင့်သတ်မှတ်ချက်ဂီယာအုံပါရှိပြီးlockableသော့ခတ်နိုင်သောအင်ဂျင်အခန်းနှင့်သီးခြားအဖုံးပိတ်နှင့်အတူလည်ပတ်နိုင်ခြင်းစသည့်တို့ဖြစ်ပါသည်။
Features: - Can be quickly set to your motor / car, get accurate readings in valves, piston rings, cylinder bores or head gaskets. - Manometer with two test pressure:0- 300 PSI /0- 21 kg / cm2. - Drain valve with full copper nickel plating, anti-oxidation and corrosion. - M10 thread is suitable for motorcycles, M12 / M14 / M18 threads are suitable for car. - With rubber protection to prevent scratches. - Come with2rubber cones that don&#039;t need to be threaded into the head, can test the compression on almost any engine. - Pressure gauge diameter: 75mm, four thread size: M10 x 1.0mm, M12 x 1.25mm, M14 x 1.25mm, M18 x 1.5mm. - Hose overall length: 430mm, pressure tube length: 150mm, angled pressure tube length: 160mm.